Musharrax Xildhibaan Aqalka sare ah oo is casilay | KEYDMEDIA ONLINE
Musharrax Xildhibaan Aqalka sare ah oo is casilay
Waxa uu la tartami lahaa musharraxiinta kala ah, Muuse Suudi Yalaxow, Axmed Xasan Cadow ( Axmed Daaci), Cabdullaahi Shiikh Xasan iyo Dr. Xasan Cadaay Cali, taas oo hadda ka dhigan inay isugu soo hareen afarta musharax, walow ay dhici karto in musharax kale uu tanaasulo.
JOWHAR, Soomaaliya- Muxudiin Xasan Afrax oo ahaa musharrax xildhibaan Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo qeyb ka ahaa liiska tartamayaashii uu soo gudbiyay Madaxweynaha maamulka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe ayaa ka tanaasulay ka qeybgalka tartanka doorashada xildhibaanimo ee dhawaan lagu qaban doono caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar.
Muxudiin ayaa waxa uu la tartami lahaa musharraxiinta kala ah, Muuse Suudi Yalaxow, Axmed Xasan Cadow 'Axmed Daaci', Cabdullaahi Shiikh Xasan iyo Dr. Xasan Cadaay Cali, taas oo hadda ka dhigan inay isugu soo hareen afarta musharax, inkastoo la filayo in ay musharaxiin kale ay tanasulaan.
Musharaxaan ayaa waxa uu ka mid ahaa afartii sanno ee lasoo dhaafay raggii u ololeynayay, oo difaacayay siyaasadda jahwareerka Madaxweynaha waqtigu ka idlaaday ee Farmaajo.
Macluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in qaar ka mid musharraxiinta Aqalka sare ee Hirshabelle oo ku tashanayay awooddii Fahad Yaasiin inta aan xilka laga qaadin kahor ayaa hadda la' lacagtii ay isku diiwan gelin lahaayeen maadaama liiska lagu soo daray.
Guddigga doorashooyinka ee Hir-Shabelle ayaa hal maalin oo dheeraad ah ugu daray si ay iskusoo diiwan geliyaan.